जलकुम्भी झारले थला परेको फेवाताल
२०७६ असोज ९ बिहिबार, पोखरा । पोखराको पर्यटकीय स्थल फेवाताल जलकुम्भीको चपेटामा परेको धेरै भयो । जति गरे पनि यो हटाउन सकिएको छैन । ... बाँकी अंश»
खगित्राले जन्माइन् चम्ल्याहा शिशु, तीन छोरा र एक छोरी, अवस्था सामान्य
२०७६ असोज ८ बुधबार, काठमाडौँ । धनगढीकी खगित्रा शाहीले चम्ल्याहा (चार शिशु) लाई जन्मदिएकी छिन् । ... बाँकी अंश»
अमिताभलाई कसले के भने ?
२०७६ असोज ८ बुधबार, करण जोहरले आफ्नो ट्वीटमा लेखे, 'भारतीय सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो प्रेरक! उहाँ एक साँचो रक स्टार हुनुहुन्छ। म अमिताभ बच्चनको युगको एक भाग हुन पाएकोमा सम्मानित र गौरावन्वित छु।' अभिनेता अनिल कपूरले लेखे, 'भारतीय सिनेमा अमिताभ बच्चन बिना अपूर्ण छ। उहाँले प्रत्येक भूमिकाको साथ सिनेमालाई पुन: परिभाषित गर्नुभएको छ। अनगिन्ती योगदानहरूका लागि उहाँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ।' ... बाँकी अंश»
दिएको पैसा उठ्दैन, पैसाको समस्या छ भने यो ऊँटले दिन्छ राहत
२०७६ असोज ७ मंगलबार, काठमाडौं । यदि तपाईं नराम्रो समयबाट गुज्रिरहनुभएको छ भने, घरमा फेङ्गशुई ग्याजेट ऊँट स्थापना गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई समस्याहरूबाट छुटकारा दिनेछ। केही विज्ञहरूका अनुसार लगानी सुरक्षित बनाउन र यसबाट अधिक प्राप्त गर्न ऊँटको जोडी स्थापना गर्नुपर्दछ। ... बाँकी अंश»
आँखाबाट आँशु हैन दैनिक ५० क्रिस्टल निस्किएपछि
२०७६ असोज ७ मंगलबार, काठमाडौं । संसारमा विभिन्न रोग देखा पर्दै गएको छ । एक चिकित्सा विज्ञानलाई हैरान पार्ने गरी घटना सार्वजनिक भएको छ कि आँखाबाट आँशु हैन दैनिक ५० स्फटिक (क्रिस्टल) निस्किरहेको छ । ... बाँकी अंश»
पास्टरको नृत्यले मच्चायो बबाल
२०७६ असोज ६ सोमबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय एक पास्टरले नृत्य गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ । यो भिडियो दिल्लीको एक पादरीको भएको बताइएको छ । उनको नाम फादर म्याथ्यू किजेकाचिरा हो। ... बाँकी अंश»
जब किशोरी मन परेको केटासंग विवाह गर्न जन्ती लिएर बेहुलाको घर पुगिन्...
२०७६ असोज ५ आइतबार, बङ्गलादेश । बङ्गलादेशमा मुसलमान समुदायको वैवाहिक परम्परालाई चुनौति दिँदै एक किशोरीले आफूले मन पराएको केटासँग विवाह गर्नका लागि ‘जन्ती’ लिएर बेहुलाको घरमा गएपछि उनीहरू यहाँको सामाजिक सन्जालमा जताततै छाएका (भाइरल) भएका छन् । ... बाँकी अंश»
अर्बपति व्यापारीका सफल छोरीहरु, जसले कर्पोरेट जगतमा मच्चाइ रहेछन् तहल्का
२०७६ असोज ५ आइतबार, काठमाडौं । भारतमा अर्बपति व्यपारीका छोरीहरु पनि सफल हुदै गएका छन् । यहाँ हामीले अर्बपतिहरूका छोरीहरू बारे बताएका छौ जो आफ्ना बुबाहरूको जस्तै व्यापारमा अत्यन्त सफल छन्। ... बाँकी अंश»
यसकारण घटे तीन अर्ब चरा
२०७६ असोज ५ आइतबार, बिरालाले हरेक वर्ष २.२ करोड चरा मारेर खान्छ । त्यस्तै ६२.४ करोड चरा झ्यालमा र २.१४ करोड चराहरु कारसंग ठक्कर खाएर मर्ने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
मोदीले केटाकेटीको किन तान्छन् कान ?
२०७६ असोज १ बुधबार, टोरन्टो भ्रमण गर्ने क्रममा मोदीले क्यानडाका वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोको सानी छोरी एला ग्रेसको कान तानेका थिए । २०१५ मा सिलिकन भ्यालीको यात्राको बेला भेला भएका भेलामा मोदीले गुजराती केटाको कान तान्दै गरेको तस्विर सार्वजनीक भएको थियो । ... बाँकी अंश»
रानु मण्डलपछि कुमार सानुको 'नजर के सामने' गाउने चालक चर्चामा
२०७६ असोज १ बुधबार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालले कुन बेला कसको भाग्य चम्काउने हो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। आजकल सामाजिक सञ्जालमा कुन व्यक्ति कति बेला कति कारणले भाइल हुन्छ भन्न सकिदैन। यसको एक उदाहरण 'रानु मण्डल' हुन्। ... बाँकी अंश»
बुढी पोल्ने ‘बुन्ढुनी’
२०७६ असोज १ बुधबार, पुत्नालाई दहन गर्ने ओल्के पर्वको दिन सल्ला, बाँझ लिङ्गो बनाइएको बारेको बुढी पोल्ने ‘बुन्ढुनी’ । ... बाँकी अंश»
आत्मविश्वासको कमी भए यसरी बढाउने
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, मानिसमा कुनै न कुनै प्रतिभा हुन्छ । आफ्नो प्रतिभालाई चिनेर अघि बढ्नाले पनि मानिसलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ । त्यस्तै, आफूले एक पटक गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने बानीले पनि मानिसलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ । ... बाँकी अंश»
खुर्सानी होस् त अकबरे जस्तो
२०७६ भदौ ३० सोमबार, बाजुरा । खुर्सानी होस् त अकबरे जस्तो । यो भनाई किसानले आपसमा कुराकानी गर्दा गर्वले भन्ने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
पकौडाका सौखिन अमित शाह, क्यान्टिनमा खान्छन् खाना
२०७६ भदौ २९ आइतबार, काठमाडौं । भारतका गृहमन्त्री तथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चर्चित नाम हो । भारतको लोकसवा चुनावमा भाजपाले बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिसँगै उनको नाम पनि चर्चामा छ । तीनै अमित शाह खानेकुरा र पेय पदार्थको शौखिन छन् । ... बाँकी अंश»
सुरु भयो सोह्र श्राद्ध, पशुपतिमा तर्पण गर्नेको भीड
२०७६ भदौ २८ शनिबार, काठमाडौँ । सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका १६ तिथिमा दिवङ्गत पितृलाई तर्पण, सिदादान र पिण्डदान गरिन्छ । ... बाँकी अंश»
दुई बाख्रा प्रहरी हिरासतमा, जरिवाना तिरेर छुटे
२०७६ भदौ २८ शनिबार, एजेन्सी। भारतको तेलंगना राज्यमा दुई बाख्रालई प्रहरी हिरासतमा लिएको छ। बाख्राहरुले अस्पताल रिसरको भर्खर रोपिएका बिरुवा खाईदिएको आरोप थियो। ... बाँकी अंश»
मोदीले राजनीतिशास्त्रमा डिग्री, अरु मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुले कति छन् पढेका ?
२०७६ भदौ २६ बिहिबार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरू पढेलेखेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदी स्वयमले पनि उच्च शिक्षा हासील गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
दैनिक ७० माइल साइकलमा यात्रा गर्थे चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति, ३० जागीर गुमाउँदा पनि भएनन् निराश
२०७६ भदौ २६ बिहिबार, अलीबाबा समूहका संस्थापक ज्याक माको जीवन चुनौतीपूर्ण थियो। ज्याक माको जन्म १० सेप्टेम्बर १९६४ मा चीनको हङ्गजोमा जिहेजिंगको एक गरीब परिवारमा भएको थियो। आफ्नो अंग्रेजी सुधार गर्न, ज्याक मा ९ बर्षसम्म एक पर्यटक गाइडको रूपमा काम गरे । उनी पर्यटक घुमिरहेको बेला अङ्ग्रेजीमा बोल्थे। पर्यटक गाईडको रूपमा काम गर्दा उनि साइकलमा ७० माइलको यात्रा गर्थ्यो। ... बाँकी अंश»
विप्लवका छोरा प्रकाश चितवनमा प्रहरीद्वारा समातिए
२०७६ भदौ २५ बुधबार, चितवन। चितवन मेडिकल कलेजमा सेवा अवरुद्ध गराउन खोजेको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश चन्दसहित १५ विद्यार्थीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। ... बाँकी अंश»